June 3, 2020 Mahad Jama 9
BUUHOODLE(P-TIMES)- Tan iyo sanadihii 2010 – 2012 waxaa deegaanada ku hareeraysan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ka dhacay dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac, kuwaas oo u dhaxeeyey dadka deegaanka oo garabsanaya ciidamada difaaca Buuhoodle iyo ciidamada Somaliland oo duulaan ku ahaa xiligaasi magaalada Buuhoodle.
Dagaaladii ka dhacay deegaanada Kalshaale, Haygaagle, Hogaagane, Sool joogto iyo Buuhoodle ayaa waxa ay Somaliland u horseedeen bur bur dhaqaale iyo awood daro xoogan, kadib markii fashil uu ku yimid qorshe ay ku doonaysay xukuumaddii Siilaanyo in ay kula wareegto gacan ku haynta gobolka Cayn.
Sanadii 2012 ayey ahayd markii ciidamada Somaliland ay iskaga baxeen deegaanada Kalshaale, Haygaagle iyo Sool joogto, waxaana dagaalo lagu riiqmay oo ciidamada Somaliland ay ku jabeen ay bilaabeen madaxda Somaliland qorshayaal kale iyo siyaasado ay ku wajahan gobolka.
Inkastoo damaca qabsashada Buuhoodle uusan ka maqnayn meesha ayaa waxaa hadana dhinac socday qorshayaal lagu khal khal galinayo deegaanka iyo siyaasado lagu kala fur furayo shacabka walaalaha, kuwaas oo xiliyo kala duwan abuuray colaado laga soo abaabulay gudaha magaalada Hargeysa haba ugu dambayso tan hada taagan.
Colaada xiligani ka taagan gudaha Buuhoodle oo salka ku haysa hirgelinta qorshayaal lagu doonayo in lagu kala jabiyo awoodaha beelaha Buuhoodle oo cadowgooda koowaad u arka Somaliland iyo ciidamadeeda ayaa waxaa xal u helideeda durbaba isku abaabulay isimadda gobolka, waxgarad, odayaal dhaqameed iyo xubno ka socda dowladda Puntland, kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Buuhoodle.
Dadaalada xal u raadinta ah oo ay hor boodayaan waxgaradka deegaanka, xildhibaanada iyo wasiirada Puntland ayaa haatan u muuqda kuwo midha dhal ah, waxaana ay kulamo la qaateen dhinacyada kala duwan ee deegaanka si xal looga gaadho colaad kale oo ka dhacda gobolka Cayn.
Xildhibaan C/risaaq Maxamed Sahal oo kamid ah mudanayaasha Baarlamaanka Puntland ee laga soo doorto gobolka Cayn ayaa kamid ah shakhsiyaadka u ololaynaya daminta colaadaasi, waxaana uu xildhibaanku kulamo la qaatay waxgaradka deegaanka oo uu kala hadlay sidii looga hor tagi lahaa xiisad kale oo ka abuurta deegaanka Buuhoodle.
Somaliland oo haatan fursad u aragta imaanshaha Buuhoodle xildhibaanada iyo wasiirada Puntland ayaa sii dhankeeda wada qorshe ay kusii xoojinayso damaceeda, waxaana hor joogayaasheedu ay dadaal badan ku bixinayaan hurinta colaadaasi si beelaha walaalaha ah ay u kala dhintaan.
Waxgaradka deegaanka iyo madaxdooda oo iyaguna ka gaashaamanaya fashil ku yimaada dadaalada nabadeed ee socda ayaa sii xoojinaya xal u helida xurgufta beelaha walaalaha, waxaana ciidamada difaaca deegaanka iyo waxgaradkuna ay isku af garteen in la xoojiyo nabada si aysan Somaliland u helin fursad kale oo colaad ay uga abuurto gobolka Cayn.
Colaada Buuhoodle Somaliland maku lug leedahay? Maxayse tahay faa’iidada ugu jirta Somaliland kala dilista beelaha Buuhoodle & Abuurista colaad dhacda?
Si guud marka aan uga hadalno Somaliland waxa ay gacan weyn ku leedahay colaada ka taagan Buuhoodle, waxaana xiligani fursad ay u aragtaa in abuurista colaad ka dhacda deegaanka halka hor joogayaasheeduna ay qayb ka yihiin fududaynta hawshaasi.
Kala dilista beelaha Buuhoodle waa faa’iidada ugu weyn ee Somaliland ay doonayso maadaama qorshaheedu uu yahay hiigsiga iyo gaadhista xarunta gobolka Cayn ee Buuhoodle, taas oo ka dhigan in Somaliland ay hirgelinayso haatan nidaam kasta oo wax ku suurta galayaan.
Damaca Somaliland iyo qabsashada Buuhoodle waa mid ku dhisan riyo iyo rajo aan dhaboobayn, waxaase si loo rumeeyo riyadaasi ay madaxda Somaliland is tuseen ka shaqaynta kala dilista beelaha Buuhoodle iyada oo adeegsanayo dad yar oo calooshood u shaqaystayaal ah.
Nabada iyo wadajirta beelaha walaalaha ah ee Buuhoodle ayaa ah awooda kaliya ee hor taagan rajada Somaliland oo u muuqata hal bacaad lagu lisay.
Gobolka Cayn oo ay gacanta ku hayso dowladda Puntland ayaa dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa in uu noqdo gobol amaan ah lana tar tama gobolada kale ee Puntland, waxaana si loo gaadhsiiyo goboladda kale ay dowladdu wadaa qorshe ay ku xoojinayso horumarintiisa iyadoona dhawaan ka furtay xafiis uu leeyahay xisbiga KAAH oo ah xisbiga dowladda gaadhsiisayna agabyo kale oo badan halka qorshuhu uu yahay in la dhiso xaruno badan oo dowladdu ay leedahay, kuwaas oo lagu shaqaynayo shacabka gobolka Cayn.
Hal qodob ayaad iftiimisay hadayba tahay sidaad u dhigtay oo ah in maliishiyaadka Buuhoodle Somaliland khasaare gaadhsiiyeen,burbur hantiyeed loona taag waayay!!!
Qodobkaasu muxuu yahay????
Waa inay ka ka ragsan yihiin Pudland oo ah maamul 20 jirsaday oo Somaliland hal taako ka riixi kari waayay si kastoy yeelaan,ciidankasta oo ay isu keeneen,tolaay kasta oo ay Ku biimeen,qaylo dhaan kasta oo ay dirsadeen.
HADDII GEEL-JIRAHA BUUHOODLE CIIDAMADA SOMALILAND KA ADAGYAHAY MAXAA HORTAAGAN PUDLAND OO KA AWOOD ROON MALIISHIYAADKA BUUHOODLE EE MEELAHAA KA QAYLIYA??????
Naf waxay ka dayayaan Somaliland Buuhoodle ha weerarto,ha layso maliishiyada masaakiinta ah ee muwaadiniinta ah!!!!
Cadowga Somaliland waa wixii ka baxsan xuduudkeeda,mana la weerarayo iyadoo ciidanka la adeegsanayo shacab Somaliland ah iyo dhul toona.
Waxa weerarku Ku jahaysan yahay iyo baacsigu ciddii ka baxsan Somaliland ee soo gasha gudaha Somaliland ee ha yimaado bal nin aan reer Buuhoodle ahayni waxa Ku dhaca.
Diiradu waa xuduudaha ee maaha tuulada yar ee Burco agteeda ah.
Waligeeed Ciidamada Somaliland masooo weerarin tuulada buuhoodle….hadaaa ujeedo dagaalkiii labada juffo eee habar jeclo & dhulbahante…oo baragahii biyaha iyo daaqiii isku qabsaday …markiii danbena ciidanka Somaliland soo Kala dhex galeeen oo xataa baraaghiii biyahana aaseeen kadib markii dadka deegaanka ka cawdeen in biyahiii loo Diiday.
Lkn Ciidmada Somaliland oo oodahoogaa wataaa amaba ISAAQ oo duulaan Ku ah buuhoodle & guud ahaan gobolka cayn lama arag lamana maqal.
Duulaankii SNM oo ISAAQ oo dhan Ku midaysnaayeen wuxu LA dagaalamay dawladiii afweeynee ee Somali u dhamayd….LKN wali ISAAQ lama dagaalamin QABIIIL!!
Hadalka Runta ka abaar waligaa!!
“Daabaca ninkii kugu dhuftay ee daabka kuu celiyay iyo kii duleelshaay ku yiri wax isma doorshaan”, Qamaan bulxan.
Adeer shalay markii KALSHAALE xabbadu ku socotay muddo 3 bilood ka badan, ee jabhadda Hargaysa iyo oodahooduba aysan waxba iila harin, waa kii FAROOLE oo horjooge u ah jabhadda Garoowe ee SSDF, lahaa waa ARGAGIXISO. Marna igu diganayey ee lahaa biyihii baa laga fariistay. Maantana hoggaamiyaha SSDF ee Garoowe, DENI, waa ka lasoo taagan Dhulbahante iyo Kalshaale waa argagixiso. Maxaan marka u soo kala dhowaysanayaa, oo midna aad GACAL iiga dhigaysaa, midka kalana CADOW?
Marka Faroole shalay sidaa u hadlayey, ee uu maantana Deni sidaa u hadlayo, waxa ay muujinaysaa sida ay uga midaysan yihiin COLAADDA Dhulbahante. Waxa ay muujinaysaa in ay jeclaan lahaayeen in ay Buuhoodle gacan gasho sida ay u gacan geliyeen Laascaanood. Waxa ay ka xun yihiin difaacidda ay reer Buuhoodle is difaaceen.
Laascaanood iyagaa sabab u ahaa in SNM ku habsato, waana ay ka wada socdeen sida dad badani ay qabaan. Hoosaasin ay hoosaasiyeen iyaga oo maamul u sheeganaya iyo TOLNIIMO aan la hubin, bay Laasku ku baxday. Laakiin reer Buuhoodle, iyagaa isku tashaday oo cid maamul sheeganaysa oo hoos cararaysay ma aysan jirin.
Waxaan marka reer Buuhoodle u sheegayaa in ay ka digtoonaadasn dhagarta ay SSDF u maleegayso si ay ugu hoosaasiyaan in SNM ay Buuhoodle ku habsato sidii laaska. Yaan laydin hoosaasin inta maamul iyo TOL aan waxba ka jirin laydin ku soo gabado. Gubs xafiiska la sheegayo oo siku tashada, kana digtoonaada dhagaraha ay kuwada socdaan jamhadaha SSDF & SNM oo isku si idiin arka. Wbt.
Meeshan waxaa iiga muuqdo, rag kibir iyo sida aay Nato yihiin u hadlay iyo Ciddii loo duur xulay oo Puntland Difaac ka gashay!!! Kkk
Ahmed Maxamed Ismaciil says:
Anigu wax kale garanmaayo Soomaali oo dhammi waa dad wareersan oo aan xisabtamin oo aan weligood ka weynaan ama tegin xumaanta ee Ilaahay waxaan ka baryeyna inuu Soomaali oodhan xaqa garansiiyo. Waxaa la degaey oo baabi`iyey wax la yidhaahdo qabiil oo If iyo aakhiraba seejiyey Somaali oodhan.
Waxaas oo dhan wax ka wanagasan gobolka cayn In ku deyeedo Lascanood , because it is the poorest region in Somaliland, Waa in
reer cayn dhistaan magaaladooda oo joojiyan orodak marna ila Somaliland marna ila Puntland. Lascanood maanta hormar gaartay, waxay nototay sida Somaliland inteeda kale. su’aashu , yaa sameeyay hormarka. Somaliland mees Puntland. Here is the question? Reer Cayn waa inay gartaan dantooda waa Somaliland
MEESHA WAXAN LAGU MAL MALUUQAY MA AHA WAX LAGU TILMAAMI KARO QORAAL CILMIYEYSAN OO CAQLI IYO XAQIIQ KU FADHIYA.
DHIBKA KA DHEX TAAGAN BEELAHA BUUHOODLE QAAR, MA AHA WAX CIDI KA DAMBAYSO, WALAA PUNTLAND, WALAA SOMALILAND, WAA SIDA SOMALIDA LAGU YAQAAN REERO WALAALO AH OO ISKU DHACAY, AARGOOSI , AANO AAN HORE LOO DHAMMAYN, REER MIYI IS LAAYA OO ISKU BAABA’A CIDNA DAWLADNIMO UMA SOO KORDHISO, CUDURKA KAA GALA FARDAHA , HADDII LAGA GUBO DAMEER, DAWADA LAMA GAADHAYO, MAQAALKA KOR KU QORAN WAA MID FOOL XUN OO MAJORO HABAABIN, OO BAADIDA SII LUMINAYA, PERVERTING THE COUSE OF JUSTICE, WAXAY SIYAASAD KA DAYAYAAN DHIIG DAADANAYA OO IN LA DAMIYO OO WADADA SAXA LOO MARO AY AHAYD, MAXAA KEENAY PUNTLAND , SOMALILAND, DHULBAHANTE, IWM, WAA 2 REER OO WALAALO AH, OO U WADA DHAMMAYN, ADEER SIYAASADDU MEESHA AY TAHAY KA DOON.
MIDDA KALE SOMALILAND SABABTA AY U JOOGTO LAASCAANOOD MA AHA XOOG, MA AHA PUNTLAND , WAA DADKA REER LAASCAANOOD INTA WAX GASHA BADANKOODA OO OGGOL, SABABTA AY BUUHOODLE U TEGI WEYDAYNAY WAA DADKA INTOODA BADAN OO AAN OGGOLAYN, SIMPLE AS THAT, NINNA XOOG LAGUMA MAAMULI KARO, SIYAAD BARRE BAA XOOG KU JOOGI LAHAA WOQOOYI, DULMIGA MA DHEERAADO. WAXAAN UGA DIGAYAA DADKA HALKAN WAX KUSOO QORA, INAY MARKA AY ARRINTU DHIIG WALAALO SOMALIYEED OO DAADANAYA AY NOQOTO, INAYDINAAN U MARIN MEEL AAN AHAYN DAWLADA HALKII LAGA EEGI LAHAA, ARRINKAA DEMBI WEYN BAA IDIINKU SUGAN, WAXAA NAXDIN IYO QARACAN AH IN WEBKA PUNTLANDTIMES, MAALIN WALBA HOG KUSII DHACAYO, DAGAAL OOGANIMINA U SII XUUB SIIBANAYO, WUXUU KA HELO BUU LEEYAHAY. BAAHIDA NINBAA KULA DEYDAYI DAALNA KAA BADINE OO AAN DOONAHAYN INAAD HESHO DAA’IN ABIDKAA, DADKUNA IDIN MOODI DUUL WADA DHASHOON WAX U DAHSOONAYN, DILLA MALAHA AAKHRIO HADDII LOO KHITAAB DAYO. QAMMAN BULXAN (AUN), ARRIMHII CALI DHUUX BAYNU WALI KA KORI LA’NAHAY, ISKU DIR, MAJARO HABAABIN,
War Somali oo dhan ma wareersan ee waa habrahaan reer Xaargeysa oo hadba qabiilbiil iska dhigaya oo qabiil kale caayaya.
Kan ama Tan la baxay or la baxday Hillac ma lab baa mise waa dhadig mise waa labeed.
Runtii waa garan waayey wuxu waxuu yahay.
Waan arkay dumar loogu yeero hilaac, hilaaco, iyo hilaacey.